Chii chinonzi U chimiro girazi / U girazi girazi?
Chii chinonzi U chimiro girazi / U girazi girazi? U girazi regirazi / U girazi girazi inochinja seU-inogadzirwa muhupamhi hwakati wandei kubva pa9 ″ kusvika pa19 ″, kureba kusvika pamamita makumi maviri nematatu, uye 1.5 ″ (yekushandisa kwemukati) kana 2.5 ″ (yekushandisa kwekunze) mafrange. Iwo ma flanges anoita iwo mativi-matatu egirazi anozvitsigira-ega, achiibvumira kuti igadzire yakareba isingamisike spans yegirazi ine mashoma ekuyera zvinhu - yakanakira masikati machena mafomu. U girazi girazi / U girazi girazi zviri nyore kuisa. An ...
Yakavezwa & Ceramic Frit & Frosted-Yakadzika-E U Mbiri Girazi / U Chiteshi Girazi
Basic Info Tinted U chimiro girazi rine girazi rine mavara iro rinodzora zvese zvinoonekwa uye zvinopenya zvinopenya. Tinted girazi ingangoita nguva dzose inoda kurapwa kwekupisa kudzikisira kunogona kupisa kupisa uye kupaza uye kunowanzo dzorerazve kupisa kwakapinza. Yedu tinted U chimiro girazi zvigadzirwa zvinouya mune akasiyana mavara uye zvakarongedzwa nekutakura mwenje. Zvinokurudzirwa kuti iwe odhe chaiwo magirazi sampuli echokwadi emiriri anomiririrwa. Makara maceramic frits anodzingwa pa650 degrees Celsius pane iyo b ...
Kuchengetedza Girazi Njanji / Girazi Pool Fenzi
Yekutanga info Chengetedza iwo maonero kubva padhesiki rako uye puru yakajeka uye isina kuvhiringidzwa neGirazi Railing system. Yakazara girazi mapaneru njanji / dziva fenzi kune yakadzikama girazi balusters, mukati kana kunze, kuisa girazi dhizaini railing system inzira-yemoto nzira yekutarisisa uye kuunza yako deck railing / dziva fenzi mazano kune hupenyu. Zvimiro 1) Yakakwira Aesthetic Inokwezva Girazi njanji dzinopa kutaridzika kwazvino uye kuridza chero imwe nzira yekutuka nzira inoshandiswa nhasi. Kune vanhu vazhinji, girazi deck handrails ari consi ...
Shower Kamuri Kuchengetedza Girazi
Yekutanga Info Smart yakadzikama yekugezera girazi: Chengetedza zvakavanzika zvako nyore Kubva zvino zvichienda mberi, zvese zvinotora iko kubatisisa kweswichi kuti uite yako yakajeka shawa yekugezera madhoo opaque. Iyo girazi tekinoroji tekinoroji inosanganisirwa muzvigadzirwa zvedu kuti ikubatsire iwe kuchinja iwo maitiro pane zvaunoda. Kunyangwe iwe uchida kuvanda kubva mukunzvera maziso kana kuita kuti mwenje upinde, iwe unongoda kubaya iro bhatani. Tiine girazi rakadzikama pamadziro ekugezera nemikova, kuvanzika kwako kunogara kuchidzivirirwa! Uri kutsvaga girazi ku comp ...
Yakajeka / Yakadzika Iron Yakadzora Girazi Kune Shower Kamuri
Basic info Ngatizvitarisei izvi, musuwo wekugezesa hausati uchingova musuwo wekugezesa, isarudzo yekunyora inoisa toni yekutaridzika uye kunzwa kweyako yese yekugezera. Ndicho chinhu chimwe chete chakakura mune yako yekugezera uye chinhu chinokwezva zvakanyanya kutarisisa. Kwete izvozvo chete, asi zvakare zvinofanirwa kushanda nemazvo. (Tichataura nezvazvo muminiti.) Pano paYongyu Girazi, tinoziva mhando yemusuo wekugezera kana tubhu yakavharika inogona kuita. Isu tinoziva zvakare kuti kusarudza iwo chaiwo maitiro, dhizaini, uye ...
Girazi re smart, iro rinodaidzwa zvakare kuti girazi rekudzora mwenje, rinoshanduka girazi kana girazi rekuvanzika, iri kubatsira kutsanangura iyo yekuvaka, mota, yemukati, uye chigadzirwa dhizaini maindasitiri.
Ukobvu: Per odha
Zvakajairika Sizes: Per odha
Mazwi akakosha: Per odha
Kushanda: Chikamu, imba yekugezera, balcony, windows nezvimwe
Nguva yekuendesa: vhiki mbiri
Girazi rakangwara, iro rinodaidzwa kuti Rinochinjika Yakavanzika Girazi, iyi mhinduro inowirirana. Pane mhando mbiri dzegirazi rakangwara, imwe inodzorwa nemagetsi, imwe inodzorwa nezuva.
Yakakwira Performance U Mbiri Girazi / U Chiteshi Girazi Sisitimu
Yekutanga Info U girazi rezita kana kunzi U girazi girazi rinotangira kubva kuAustria. Iyo zvakare inogadzirwa anopfuura makore makumi matatu nemashanu kuGerman. Seimwe yezvinhu zvakajairika zvinoshandiswa muzvirongwa zvikuru zvekuvaka, girazi reU rinoshandiswa zvakanyanya muEurope neAmerica. Iko kunyorera kweU girazi girazi muChina kwakanyorwa kubva kuma1990. Uye ikozvino nzvimbo zhinji muChina dzinoishandisa iyo yayo yepasirese-yakavakirwa dhizaini dhizaini. U girazi repamhando imwe yemhando yekukanda magirazi. Iko kufambira mberi kwekuumba mu ...
Yakaderera Iron U Mbiri Girazi / U Chiteshi Girazi Simba Rokugadzira System
Basic Info Yakaderera simbi U girazi girazi rekugadzira girazi zvekuvakisa (UBIPV) inosanganisa zvakanakira U chimiro girazi rekuvaka uye rezuva gadziriro yekugadzira system kusimudzira girini kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye simba-kuchengetedza uye kudonhedza mweya. UBIPV neguta zvinogona kubatanidzwa zvakabatana kuita photovoltaic chikamu chehupenyu hwevanhu. Haisi yekuvaka chete, asi inogona zvakare kuwana simba-kuponesa uye simba-rinogadzira zvinangwa, uye inogona zvakare kusangana pamwe ne ...